Ramamimampionona Gérard : “Mampihavana raha politika marina no atao” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard : “Mampihavana raha politika marina no atao”
“Raha tena te hanova ny firenena isika, mila ny hoe fanorenana ifotony. Miainga amin’ny olombelona ny fanorenana fa tsy amin’ny vola na ny fitaovana, ohatra. Miainga amin’ny olombelona tsirairay eny amin’ny toerana sy ny sehatra misy azy avy aloha izay.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha lefitry ny Conseil du fampihavanana malagasy (CFM), faritany Antananarivo, Ramamimampionona Gérard, momba ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Omena haja sy hasina ary andraikitra avokoa ny isam-batan’olona amin’izany. Avy amin’izay no tonga ny hoe fiarahamonina sy firaisamonina. Rehefa miara-miaina vao mandeha ny hoe politika.
Ny politika izany, tsy tokony hanohitra ny fahendrena hoe mitady ny soa ho an’ny besinimaro. Koa raha samy tena manao politika marina ary tena politika tokoa no atao, tsy tokony hiady. “Mampihavana ny politika raha ny tokony ho izy satria miara-mitodika mankany amin’ny vahoaka sy miara-mikatsaka soa iombonana”, hoy izy.
Eo ny fitondrana am-perisana. Raha mibirioka izy, sanatria, manitsy izany ho amin’ny soa ho an’ny vahoaka ny mpanohitra. Mampihavana raha tena politika marina. Ny politika itadiavana tombontsoa manokana ho an’ny tena no mampiady.
Mila fanitsiana ny fanaovana politika
Koa raha tena hitodika amin’ny fanorenana ny firenena, miainga amin’ny tsirairay sy ny fiarahamonina. Eo koa ny fanorenana ifotony ny fanaovana politika: ahoana ny tena fomba fanaovana politika eto Madagasikara? 62 taona izay ny Repoblika, nefa mihamahantra. Sao tsy nanao politika izany? Na nilalao politika fa tsy nanao politika… Amin’izao fotoana izao, tena mitodika mankany amin’ny vahoaka avokoa ve ny mpanao politika?
Raha amin’izao vanim-potoana sarotra izao, sanatria, no mbola hampisy korontana: tsy soa fa fahoriana ho an’ny vahoaka izany, tsy politika fa famonoana olona. Mila ahitsy ny fomba fanaovana politika eto amin’ny firenena mba tsy hampandova zavatra mampahory vahoaka ary mampahantra hatrany ny firenena.